သီးသန့်မူဝါဒ | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Broadcast Beat - သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
သင်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်စုဆောင်းသည်စသည့်အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်အပြင်သင်၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ပါ ၀ င်သောဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည့်လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လျှောက်လွှာများ (အက်ပလီကေးရှင်းများ) ကိုအသုံးပြုခြင်း။ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပါရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုရှင်းပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်သင် ၀ မ်းမြောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆကြောင်းသတိပြုပါ။
ထုတ်လွှင့်ဘိ, အထုတ်လွှင့်ဖို့နည်းပညာသတင်း-and သတင်းအချက်အလက်များသည်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း post ဖို့ဒီဇိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 4028 NE 6th ရိပ်သာလမ်း, ဝိန်း Fort Lauderdale, FL 33334 မှာတည်ရှိပါတယ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်အရေအတွက်ကို 954-233-1978 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှ Access ကိုကြှနျုပျတို့၏ website မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည် www.broadcastbeat.com။ ထုတ်လွှင့် Beat ကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကိုလိုက်နာသောသူတို့၏အမျိုးအ privacy နဲ့ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတို့အတွက်သင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှင့်မှုလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်သင်၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများကိုသင်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ၎င်းကိုအသစ်သော၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းများနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများကိုစမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ခြေရာခံသည်။ သင်ဆန္ဒအလျောက်သင်ပေးပို့သောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ဥပမာ - အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပြပွဲများတွင်ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ၊ အင်တာဗျူးများတောင်းခံခြင်း၊ စာရွက်ဖြူများ၊ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ပြိုင်ပွဲများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအသိပေးငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကျနော်တို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပုံကိုကျနော်တို့ကစုဆောင်းပုံကို, သငျတို့ထံမှစုဆောင်းစေခြင်းငှါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယ်အရာကိုဒေတာ (PD) နှင့် Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ (NPD) သင်ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအသိပေးကိုလည်းသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူရှိသည်သောအချို့သောတရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုရှင်းပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့် app များကို အသုံးပြု. ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုတင်ပြတဲ့အခါ, သငျသညျအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) နှင့်အခြားဥပဒေများအောက်တွင်အချို့သောအခွင့်အရေးများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ processing များအတွက်ဥပဒေရေးရာအခြေခံပေါ် မူတည်. အောက်ပါအခွင့်အရေးများအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုရှိစေခြင်းငှါ:
အကြောင်းကြားရန်အခွင့်အရေး - သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ကြားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
လက်လှမ်းမီမှုအခွင့်အရေး - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းအတည်ပြုပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆုံးမပဲ့ပြင်ပိုင်ခွင့် - သင်၏မမှန်ကန်သော (သို့) မပြည့်စုံလျှင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ဖျက်ပိုင်ခွင့် (မေ့လျော့ခံရပိုင်ခွင့်) - ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက်မရှိပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့် - သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်လိုက်သောအခါသင့်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊
ဒေတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန်လက်ျာ - သငျသညျကိုတောင်းဆိုရငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးကြောင်းကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကို၏ 30 ရက်အတွင်းသင်တို့ဒေတာများကိုပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုတောင်းဆိုရန်, ဒီ privacy ကိုအသိပေးရဲ့ထိပ်မှာသတင်းအချက်အလက်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်တရားဝင်အာဏာပိုင်၏အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား / လေ့ကျင့်ခန်း (ပရိုဖိုင်းအပါအ ၀ င်) အပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (အချက်အလက်အပါအဝင်); နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာ / သမိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်စာရင်းအင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ယူခြင်း။ အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ အခွင့်အရေးများ။
အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆုံးဖြတ်ချက် - သင့်အားဥပဒေရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့် (သို့) အလားတူစွာသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆုံးဖြတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုသင်ခံယူခွင့်မရှိပါ။
အာဏာပိုင်များနှင့်အတူတိုင်ကြားချက် - သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ရသေးလျှင်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့်အတူတိုင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များစနစ်တကျသင့်တိုင်ကြားချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်, သင်ကတရားစီရင်ရေးဆေးတစ်လက်ပိုင်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ။ ပညတ်တရားအောက်၌သင့်ရဲ့အခွင့်အရေး, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက် www.privacyshield.gov/
သငျသညျ Beat အသံလွှင့်အသုံးပွုသောအခါငါတို့သည်သင်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန် "cookies များကို", "web beacons" နှင့်အလားတူကိရိယာများကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ဒါတွေကအသေးကိုအပိုင်းပိုင်းသင့် hard drive ကိုအပေါ်မထုတ်လွှင့် Beat website တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
သင် Broadcast Beat ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အလွယ်တကူသွားလာရန်နှင့်သင်၏လက်ရှိ session နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်သားရန် cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင့်အားသူလျှိုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုကျူးကျော်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှကွတ်ကီးများနှင့်ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်။
Broadcast Beat ဝဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့အားကာကွယ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်စံလုံခြုံရေးအစီအမံများရှိသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်“ ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေး” ကဲ့သို့သောအရာမရှိသော်လည်းသင်၏သတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခြေလှမ်းများလှမ်းပါလိမ့်မည်။
ဒေတာအားလုံးကိုမှတဆင့်စာဝှ SSL / TLS ပြီးမှငါတို့ဆာဗာများနှင့်သင့် browser ကိုအကြားကူးစက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စဒေတာ (ကလျင်မြန်စွာရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) encrypted, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကြွင်းသောအရာမှာသင့်ရဲ့ဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအတိုအရှည်ကိုသွားမပေးပါ။
ကျနော်တို့ဆို Third-ပါတီများနှင့်အတူဤဒေတာကိုရောင်းချရန်သို့မဟုတ် share လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့, ကပ်ဘေးဆိုင်ရာစနစ်အားပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်း, Backup တွေကိုစောင့်ရှောက်လုပ်ပါ။ အဆိုပါ Backup တွေကိုတစ်လှိမ့ 30 နေ့ကသံသရာအပေါ်ပြေတတ်ကြသည်။ အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြတဲ့အခါသူတို့ကအလိုအလျှောက်တစ် 30 ရက်ကြာ-သံသရာအပေါ်ပြေတတ်ပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်မှပြင်ဆင်ချက်ဒီ URL posted မည်ဖြစ်ပြီး posted သည့်အခါထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပြင်ဆင်ရေး, ပြုပြင်မွမ်းမံ, ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲမှု၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါဒီ site ၏သင့်ဆက်လက်အသုံးပြုမှုပြင်ဆင်ရေးသင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုဖွဲ့စည်းကြမည်။ ကျနော်တို့အကောင့်ပိုင်ရှင်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့အသိပေးစာအားမရသဖြင့်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအကြောင်းသင့်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤ privacy ကိုကြေညာချက်သို့မဟုတ်အသံလွှင့်ဘိနှင့်သင်၏ဆကျဆံပုံကိုအကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါက, သင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].